रिसर्च : लामो समय अन्तरिक्षमा बसे के हुन्छ ? - Mero LifeStyle Mero LifeStyle
रिसर्च : लामो समय अन्तरिक्षमा बसे के हुन्छ ?
लामो समयसम्म अन्तरिक्षमा बस्नेहरुको हृदय संकुचित हुनसक्ने शोधकर्ताले दाबी गरेका छन् । त्यहाँ बस्दा लो इन्टेनसिटी एक्सरसाइज पनि हार्टमा पर्ने असरलाई रोक्नको लागि उचित हुँदैन । यो दाबी यूनिभर्सिटी अफ टेक्सास साउथवेस्टर्न मेडिकल सेन्टरका शोधकर्ताहरुले आफ्नो रिसर्चमा गरेका छन् ।
उनीहरुले अन्तरिक्षमा बस्नेको शरीरले भार महशुस नगर्ने बताएका छन् । यसलाई बुझ्नको लागि शोधकर्ताहरुले २०१५ देखि लिएर १०१६ सम्म अन्तर्राष्ट्रिय स्पेस स्टेशनमा रहेकी अन्तरिक्ष यात्री स्कट केलीको अध्ययन गरेका थिए । उनको तुलना २०१८ मा प्रशान्त महासागरमा लामो समयसम्म तैरिने तैराक बिनायड लेकोम्टसँग गरिएको छ । किनभने त्यो बेला तैरिने बेला अन्तरिक्षको जस्तै मानिस भारहीनताको अनुभव गर्दथ्यो । तैराक बिनायडले प्रशान्त महासागरमा १५९ दिनसम्म तैरिएर २ हजार ८ सय २१ किलोमिटरको दूरी पार गरेका थिए । उनी एक दिनमा करिव ६ घण्टासम्म तैरिएका थिए । उनीहरु दुवैको डाटाको प्रयोग रिसर्चमा गरिएको थियो ।
यसकारण घट्यो आकार
शोधकर्ताहरुले जब हामी बस्छौँ वा उभिन्छौँ तब ग्रेभिटी हुने भएको कारण मानिसको ब्लड पैतालका तर्फ धेरै फ्लो हुने गरेको बताएका छन् । हार्टले यसलाई पनि सम्हाल्नु पर्दछ । र ग्रेभिटीविरुद्ध हार्टले आफ्नो आकार त्यत्तिकै राख्दै पूरा शरीरमा ब्लड पुर्याउनुपर्दछ । तर अन्तरिक्षमा ग्रेभिटी त्यति हुँदैन । जसका कारण पम्प गर्नका लागि हार्टले धेरै मिहेनत गर्नुपर्दछ । वैज्ञानिक भाषामा यसलाई एट्रोफी भनिन्छ । जसका कारण अन्तरिक्ष यात्रीको हड्डी कमजोर बन्छ ।
२ इन्चबाट घटेर १.८ इन्च भयो
रिसर्चमा केलीको वेन्ट्रिकलको आकार २ इन्चबाट घटेर १.८ इन्चमा झरेको छ । तैराक बिनायडको भने १.९ बाट घटेर १.८ इन्च भयो ।